China, Yakagadziriswa, Ballet Zvipfeko, Nyanzvi Yakagadziriswa Tutu, Ballet Tutu, Ballet Skirts, Dance Leotard, Mutengo, Vatengesi, Fekitori - Fitdance ballet fekitori
Dhanzi uye nguva isati yakwana ndeyaviri zvisikwa, uye shangu dze ballet muenzaniso usingawanzoitika.Flat-soled ballet bhutsu inozivikanwa neayo isingagumi, yakashongedzwa uye yakaderera-kiyi fashoni fashoni, iyo inogona kunge iri yekufanirwa-kuva mune yega yega French wadhi yewadhi.
Chii chinonzi Tie-dyeï¼Ÿ
Pamusoro peChina, India, Japan, Cambodia, Thailand, Indonesia, Malaysia nedzimwe nyika zvakare zvine tayi-dhayi mabasa emaoko. Muma1970, kuseta-tayi kwakave chinhu chakavezwa chemaoko, chinoshandiswa zvakanyanya muzvipfeko, zvisungo, machira akasungirirwa, nezvimwewo.Kushandisa kuruka kwakawanda uye......
Ballet Tutu yakatanga uye ichivandudza sei?
Kana zvasvika kune ballet, munhu wese anonyanya kuzivikanwa ne "Swan Lake", mufananidzo wechena hova, yakanaka yekumira yekutamba, uye yakasarudzika "Four Little Swans". Iyo gauze skirt yaive pfupi uye ipfupi zvakare, kubva pasi pebvi kusvika pamusoro pebvi. Iko kukura kwese kwakachinja kubva kuFran......
Musikana wese anoita kunge ane princess hope. Anoda kupfeka rokwe rebhuruu raElsa, anoda kupfeka jena remuchato jena paanoroora, uye anoda kupfeka tutu ane mavara.
Makorokoto mukubudirira kwakazara kwe6th Wuhan Dance Costume uye Dhizaina Zvigadzirwa Expo
Kubva muna Kubvumbi 14 kusvika 17, 2021, iyo yechitanhatu Wuhan Dance Costume uye Dance Supplies Expo yakaitirwa muHoro B5 / B6 yeWuhan International Expo Center uye yakapera zvinobudirira.
Akawanda akakosha masitaera ekutamba koshitomu dhizaini
Dhizaini dhizaini dhizaini inoteedzera kukosha kwekutenderedza uye hunyanzvi hunhu hwakasimbiswa muchimiro uye zvemukati zvemutambo wekutamba. Zvipfeko zvekutamba zvinofanirwa kuve zvakasanganiswa nemabasa ekutamba, kuratidza kwakasarudzika mazano ekugadzira uye zvekuita zvehunyanzvi, uye zvakare ku......